Mofon’aina – TALATA 09 MAY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 09 MAY 2017
1 Ary Jehovah niteny tamin’ i Mosesy ka nanao hoe:2 Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak’ i Ory, zanak’ i Hora, avy amin’ ny firenen’ i Joda;3 ary efa nofenoiko fanahin’ Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ ny tao-zavatra samy hafa:4 dia ny hihevitra hanao asa kanto, ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina5 sy ny hamboatra vato halatsaka an-tranontranony ary ny handrafitra hazo, mba hanaovany ny tao-zavatra samy hafa.6 Ary, indro, Izaho efa nanome an’ i Oholiaba, zanak’ i Ahisamaka, avy amin’ ny firenen’ i Dana, ho namany; ary ny fon’ izay hendry rehetra dia efa nasiako fahendrena, mba hanaovany izay rehetra efa nandidiako anao:7 dia ny trano-lay fihaonana sy ny fiara hasiana ny Vavolombelona sy ny rakotra fanaovam-panavotana, izay eo amboniny, sy ny fanaka rehetra momba ny trano-lay.8 sy ny latabatra mbamin’ ny fanaka momba azy, sy ny fanaovan-jiro tsara mbamin’ ny fanaka rehetra momba azy, sy ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra9 sy ny alitara fandoroana ny fanatitra odorana mbamin’ ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy, sy ny faladiany.10 ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho an’ i Arona mpisorona sy ny fitafian’ ny zanany ho entiny misorona,11 ary ny diloilo fanosorana sy ny ditin-kazo manitra ho ao amin’ ny fitoerana masina: araka izay rehetra nandidiako anao no aoka hataon’ ireo.
EKSODOSY 31 :1-11
NY FAHENDRENA OMEN’NY TOMPO
Rehefa miantso mpanompo Andriamanitra dia manome azy ireny fahendrena. Ny fahendrena omen’ny Tompo :
1- Ikendrena asa kanto
Eo amin’ny and 4 no ahitana fa rehefa omena ny fanahy st fahendrena ny olona nofidin’ny Tompo dia ikendrena ny mba hiheverany hanao asa kanto izany . Tsy eo am-panaovana ihany, fa vao eo am-piheverana ny asa sy ny raharaha koa aza. Asa kanto no andrasan’ny Tompo amintsika , matoa omeny ny Fanahiny isika . Katsaho ny handraisana ny Fanahy sy fahendrena avy amin’ny Tompo , amin’ny komity sy fiheveran-draharaha , ary amin’ny fivoriana hanapan-kevitra dia tsy hanao kitoatoa , na hananga-tànana foana tsy am-piheverana handany hevitra iray isika . Tsarovy fa mikendry ny hanaovantsika asa kanto ny Tompo matoa manome antsika ny Fanahy sy fahendrena avy Aminy .
2-Ikendrena fankatoavana an’ Andriamanitra
Eo amin’ny and 6b indray no ahitantsika fa i Oholiaba sy ny namany dia nasian’ny Tompo fahendrena koa tao am-pony , mba hanaovany asa mifanaraka amin’ny Tenin’ny Tompo nampitondraina an’i Mosesy . Fitaomana ny olona hankato an’ Andriamanitra eo am-panaovana asa no tiana hambara amin’izany. Tsara hotandremana àry ny miasa sy manompo tsy araka ny teny , na sitrapon’ Andriamanitra fa tsy fahendrena avy amin’ny Tompo ny toy izany .
Inona ny hevintsika ny amin’ireo mpino ary mety ho anisany isika , izay manao ala sa fay amin’ny fanompoana sy famitana ny adidy ?
Mofon'aina - ZOMA 05 MAY…
Mofon'aina - ALAROBIA 10…